Waa maxay Biogas aqoon | Somali music, lyrics, songs, mp3 Warwad
Waa maxay Biogas
Biogas waa Energi (tamar) badan Gas iskuga jira, taasoo si dabiici ah looga helo marka neefta lagu celiyo waxyaabaha orgaanishka ah, baroseeserkaas ayaa technik ahaan Biogas-keediyaal loogu guuleestaa, asigoo la isticmaalayo saxarada, qudaarta soo harta, ama abuurka enerjiga badan leh sida galeeda cooskeeda. Waxaa lagu keediyaa meel meeshaaso afka qalaad lagu dhaho Fermentern (oo ah qaab qamiirin), si neefta baxeeso lagu celiyo. waxaa ka sameesmaayo Mikroorganismen (cayaanka aan indhaha arkin) oo badan kuwaas dhalinaayo gaaska.
Sheega ugu muhiimsan laga helo waa Maaddada shidmata ee Methan (CH4), inkastoo hadba ku xerantahay waxa dabiiciga aad isku darto, waxaa laga helaa 50 ilaa 65 Prozent . Waxaa ku xiga Kohlendioxid (CO 2) asaga a 35 ilaa 50 Prozent. Inta kale waa biyo, oksijiin iyo waxyaabo kale.
Biogas waxaa laga sameen karaa. Koronto, Gas, kuleeliso ama loo badali karaa shidaal.
Haraaga ka soo harana waxee noqotaa caro dhirta aad ugu fiican oo loo isticmaali karo beeraha. Sidaas awgeed ayee dhirtana ubadataa taa oo ah faaidada ugu ween ee biogas maadaama dhirta sii badaneeso eesan dhamaaneen is dhaleeso halka shidaalka caadiga oo dhamaado.
Warbaxintaan guud ahaan ayaan kor marnay maqaaladeena danbe waxaan jecelnahay inaan idinku sharaxno qaabka aad ugu faaideesan kartaan oo sahlan.